InstaForex ပွဲစားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2019 | အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှု Make နည်းကိုဖတ်ပါ - က ISO
"သန်း7ကျော် clients များ"
အလည်အပတ် InstaForex ယခု
InstaForex နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်အတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုထက် ပို. ဆယ်စုနှစ်နှင့်အတူရုရှား ECN-ပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ7clients များနှင့်နီးစပ်သောနေ့တိုင်းအသစ်ကအကောင့်ဖွင့်နှင့်အတူသန်း 1500 ကျော် clients များဝတ်ပြုကြလော့။
အဆိုပါပွဲစားဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များ၏ရုရှား Association ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ clients များထောက်ပံ့ပေးသည်။ clients စတော့ရှယ်ယာ, ကုန်စည်, Forex, CFDs, cryptocurrencies နှင့်ညွှန်းကိန်းရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။ စုစုပေါင်းခုနှစ်, ပွဲစား 107 ငွေကြေးအားလုံးနှင့် 88 CFDs ထက်ပိုပေးထားပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ရှေးခယျြ InstaForex 300 + ကုန်သွယ်တူရိယာ
30% ကနေ 100% အထိအပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေ
InstaForex အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ထားပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားဘဏ္ဍာရေးဆု တတန်းအတွက်နှစ်အတော်ကြာသည်။ ဒါဟာအစအာရှဒေသအပါအဝင်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများရန်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဤတွင်ပွဲစားတစ်ဦးအမြန်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
အဆိုပါပွဲစားအသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအဘို့ကုန်သွယ်အကောင့်ပေးပါသည်။ Beginners အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံဒီလောက်စွန့်ခြင်းမရှိဘဲကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အသုံးပြုသူကို enable ကို virtual ရန်ပုံငွေများပါရှိသည်သောသရုပ်ပြအကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကုန်သွယ်အကောင့် features တွေအမှန်တကယ်အကောင့်တစ်ခုကိုဆင်တူသော်လည်း, အမြတ်နဲ့အရှုံးကို virtual ဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာ $ 1 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်ပြီး 1 မှတက်တဲ့သြဇာရှိပါတယ်: 1000 ။ တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့သြဇာကုန်သည်များပိုကြီးတဲ့အနေအထားနေရာခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါဟာ $ 1000 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်လိုအပ်သည်။
အကောင့် 3-7 pips အကြားမည်သည့်ကော်မရှင်, ပြန့်ပွားပျမ်းမျှပူဇော်ပါဘူးနေစဉ်။ ဒီအကောင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သူတို့တစ်တွေနိမ့်ဆုံးကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်မလိုအပ်သကဲ့သို့ဤအကောင့်အရင်ကဆိုရင်အဘို့သင့်လျော်သည်။ ကုန်သည်ကြီးများသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်မှုအသုံးချမှ 0.0001 အများကြီးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးယူနိုင်ပါတယ်။ အပြင်အနည်းဆုံးသဘောတူညီချက်အရွယ်အစားရတဲ့ကနေ, သင်နီးကပ်မှသုညအန္တရာယ်နှင့်အတူရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
အတူကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် InstaForex ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်သင့်အမည်, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာအပါအဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဧရိယာပေါ်တွင်သင်၏အသေးစိတျကိုပေး။ အဆိုပါပွဲစားနေထိုင်ရာသင်၏ကိုယ်စားပြသသော ID သို့မဟုတ် utility ကိုဥပဒေကြမ်းများတူသောစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်သင်မေးပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်ပြီးတာနဲ့အတည်ပြု 24 နာရီအတွင်းပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကောင့်မှအတည်ပြုပြီးသောအခါသင်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနောကျ, သင်သည်သင်၏ account ကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအသေးစိတျဟက်ကာများ၏အလားအလာအန္တရာယ်ကနေသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ် InstaForex client များသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးရှုထောင့်များတွင်အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။ ဒါက client များ client များ '' မြို့တော်၏ပြီးပြည့်စုံသောလုံခြုံရေးနှင့်အတူတစ်ဦးအသားအရောင်ခွဲခြားအကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြုသောအနည်းငယ်ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
နှင့် InstaForexသင်သည်သင်၏ရန်ပုံငွေ၏လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဤသည်အသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိနှစ်ဦးစလုံးကုန်သည်များကိုကြည့်ဦးတည်း feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံအားလုံးသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်, သင် SMS ကိုစကားဝှက်ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဧရိယာပေါ်တွင်စကားဝှက်ကိုတစ်ဦးအပြောင်းအလဲဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်အကောင့်လည်းမရှိအခါတိုင်းတစ်ဦးအတည်ပြုရန်ကုဒ်သင့်ဖုန်းကိုစေလွှတ်နေပါတယ်။
သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းနံပါတ်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ, သင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအကောင့်လက်လှမ်းထံမှအာမခံချက်လုံခြုံရေးလက်ခံရရှိသည်။ တစ်ဆုတ်ခွာအောင်သောအခါတူညီသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒီစနစ်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ရန်ပုံငွေများသင့်ရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲမဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းအာမခံနေကြသည်။
InstaForex ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ client များ '' ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ Two-Factor authentication ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီလိုလုံခြုံရေးအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစကားလုံး password ကိုနှိုင်းယှဉ်အကောင့်အသစ်များ၏ပိုမိုမြင့်မားလုံခြုံရေးအတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်က client ကိုကက်ဘိနက်သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ option ကို enable နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်အားလည်း Google Authenticator ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်အတူတက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကအားလုံးမဟုတ်ပါ; တိုင်း Client အအသွားအလာ wiretapping ကနေကာကွယ်ထားသည်။ အဆိုပါပွဲစားကိုလည်း password များကိုဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အဆင့်မြင့် encoding ကနှင့် SSL ကိုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ တစ်ဦးကို client အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းသည်ဆိုပါကထိုကိစ္စဖြေရှင်းပြီးသည်အထိ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမန်နေဂျာကအကောင့်ဘောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
"Highly အကြံပြု Forex ပွဲစား"
အဆိုပါပွဲစားတွင် Meta-ကိုးကားဆော့ဝဲ Corporation မှ MT4, MT5 နှင့် Multiterminal software ကိုပလက်ဖောင်းပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကတိုင်းကုန်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တင်းဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲရေးသူမိုဘိုင်း, desktop ပေါ်ကနှင့်ဝက်ဘ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကသင်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်သမျှ tools တွေကိုရှိသည်။
သို့သော်ရှိသမျှသောကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုရှိပါတယ်။ MT4 လူကြိုက်အများဆုံး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, MT5 ကမ်းလှမ်းမှု
အပိုဆောင်း tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်။ အဆိုပါ MetaTrader ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုခြင်း, သင်ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအပါအဝင်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာမှာများစွာသောအမျိုးမျိုး employ နိုင်ပါတယ်။
ကုန်သည်တွေနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအကောင့်ကိုဖန်တီးရန်သူတို့ကိုအသုံးချဘာဖြစ်လို့ဒီအကရှင်းပြသည်။ အလားတူ, Multiterminal ပလက်ဖောင်းကွဲပြားခြားနားသော client များအတွက်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲလိုသူကုန်သည်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျ Android နဲ့ IOS ကိုဗားရှင်းများအတွက် Google Play စတိုးကနေကုန်သွယ် software ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုခြင်း, ကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာနှင့်ကိုက်ညီသောအညွှန်းကိန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျကိုလညျးယူအမြတ် set နဲ့အရှုံးကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံး MT4 နှင့် MT5 ပလက်ဖောင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်မည်သည့်ကိရိယာမှဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင် applications များ install လုပ်ပြီးတာနဲ့, သင်သွားလာရင်းစဉ် CDFs, စတော့ရှယ်ယာ, ငွေကြေး, သတ္တုနှင့်ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
InstaForex ထို့အပြင်ထူးခြားသောကုန်သွယ်စနစ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကောင့်ရှိပါကသင်သည်မိတ္တူကုန်သွယ်ရေးနှင့် PAMM ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤအမှုစနစ်များကောင်းစွာအသုံးပြုကြသည်တဲ့အခါသူတို့ကမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းပေးပါ။ အဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်နှင့်အမြတ်အစွန်းရစေခငျြတဲ့သူကုန်သည်များအဘို့, သူတို့က signal ကိုနောက်လိုက်များနှင့် PAMM ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
မိတ္တူကုန်သွယ်မှုနှင့်အတူ, သင်ရုံအောင်မြင်သောကုန်သည်များဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို copy နိုင်ပြီးထို့နောက်သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ Forex Copy ကူးသည့်စနစ်မိတ္တူနဲ့အခြားအရောင်းအလိုအလြောကျသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်အာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြု။
အဆိုပါပွဲစားသိုက်၏မျိုးစုံနည်းလမ်းများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဘဏ်ဝါယာကြိုး, Skrill, Neteller, Bitcoin, PaySec, UnionPay, WebMoney, ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များအပါအဝင်နှုတ်ထွက်။
တစ်သိုက်နည်းလမ်းအဖြစ်ဘဏ်ဝါယာကြိုးသုံးပြီးသောအခါ, ငွေပေးငွေယူ 2-4 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဘဏ်ဝါယာကြိုးကနေ, အခြားနည်းလမ်းများချက်ချင်းသိုက်ဘို့ခွင့်ပြု / နှုတ်ထွက်။ သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေ၏လုံခြုံရေးသေချာစေရန်, သိုက်မှအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကိုဆုတ်ခွာ၏တွေနဲ့အတူတူပင်ဖြစ်ရပါမည်။
သူတို့ရဲ့အစုစုအတွက်ထက်ပိုမို7သန်း clients များနှင့်အတူ, InstaForex 10 အပြည့်အဝ-ကတိပြုဆာဗာများထက်ပိုရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကြားခံဆာဗာများနှင့်အတူယာဉ်အသွားအလာမျှဝေပါ။ ကုန်သည်ကြီးများ High-grade ကိုချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကိုရယူနိုငျပါသညျ။
အမှုတစ်ခုကြားခံဒေတာစင်တာကို Overload လည်းမရှိ, ထို client ကိုအခြားဒေတာစင်တာမှအလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲနေသည်။ အဆိုပါနည်းပညာပံ့ပိုးမှုအကောင်းဆုံးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အဆိုပါပွဲစားအဆိုအရဆာဗာထက်နည်း 0.2 စက္ကန့်အတွင်းကမ္ဘာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် client များရောက်ရှိ။
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်မှုအသုံးချရန်, ပွဲစား Third-party သုတေသန tools တွေကိုပေးထားပါတယ်။
အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကသူတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးဖို့အရင်ကဆိုရင်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ကမ်းလှမ်း tools အချို့ဗီဒီယိုကလဲ tutorial, ဗီဒီယိုအင်တာဗျူးတွေနှင့် webinars ပါဝင်သည်။ နယူးကုန်သည်များသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများစမ်းသပ်ဖို့အခမဲ့သင်တန်းများရရှိနိုင်သည်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်ရန်ပုံငွေနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုနှင့်ချေးငွေဖွင့်လှစ်တစ်ချိန်ကနှင့်အညီ, သငျသညျ analytics သတင်းလွှာများနှင့်ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများဘို့စာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစျေးကွက်လေ့လာနေအများအပြားနာရီပေါင်းကြသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးသပ်သူများကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဤအချက်အလက်လက်တွေ့ကျတဲ့အသုံးပြုရန်တွက်ချက်မှုများနှင့်ဖော်မြူလာတစ်ခုအကျဉ်းချုပ်ပေးသည်။ ကုန်သည်ကြီးများသူတို့လိုချင်တဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါနှင့်၎င်းတို့၏အီးမေးလ်ထဲတွင်ညာဘက်ခံယူနိုင်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းမိမိတို့၏ website တွင်စျေးကွက်ဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာဖို့ Forex ပြက္ခဒိန်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ပိုကောင်းနေဆဲ, သင်ကကုန်သွယ် Simulator ကိုအခွင့်ကောင်းယူနှင့်သင့်အရောင်းအများ၏ replays ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ထားရန်, ထိုပွဲစားသင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းအပေါ်ကို real-time တုံ့ပြန်ချက်ပေးထားပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များနှင့်သတင်းဝင်ရောက်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်နည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ InstaForex.
အဆိုပါပွဲစားဖောက်သည်ကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်း InstaForex ဆုကြေးငွေကြိုဆိုပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အန္တိမအရွယ်အစားနှင့်ကုန်သွယ်၌မိမိတို့သုံးစွဲခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွာခြား။ ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေတွင်, client များတစ်ဦး 100% ဆုကြေးငွေကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ အလားတူပမာဏကိုချက်ချင်းသင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ဤသည်ကုန်သည်များကြီးမားသောအများကြီးအရွယ်အစားကုန်သွယ်မှုရန်နှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအမြတ်အစွန်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်အနေနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
InstaForex ထို့အပြင်မှ 30% ဆုကြေးငွေပေးသည် InstaForex ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ။ ဆုကြေးငွေပမာဏကိုသင်အပ်နှံင့်ပမာဏပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဆုကြေးငွေ၏ဤအမျိုးအစား 40% သကဲ့သို့မြင့်မားသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကျော်ကြားဆုကြေးငွေ 55% ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကောင့်တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခရရှိသွားတဲ့မှီကချီးမြှင့်ပါတယ်။
တိုင်းကုန်သည်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသူတို့ယခင်အရောင်းအအတွက်ဆုံးရှုံးဘယ်လောက်၏ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုများအတွက်ငျြးပွညျ့မီ။ Plus အားသူတို့ Forex အတွက်ပိုကြီးတဲ့အပေးအယူစေနိုင်သည်။ clients အကောင်းဆုံးသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာပေါ် မူတည်. သူတို့ကိုကိုက်ညီသောဆုကြေးငွေပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များကိုရနိုင်။
သင်တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကောင့်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့သင်ကထူးခြားတဲ့ Affiliate link ကိုပေးတော်မူပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစားမှသင်၏မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံသင်သည်သူတို့ဖွင့်တိုင်းကုန်သွယ်မှုများအတွက်တစ်ဦးကော်မရှင်ရ။ လွှဲပြောင်းအောက်မှာ clients 1.5 pips ကော်မရှင်ရ။ အင်ဒိုနီးရှား၌, Affiliate အစီအစဉ်တွင်အောင်မြင်သောခဲ့ကြသူဖောက်သည်ရာပေါင်းများစွာရှိပါသည်။
နေ့တိုင်း။ အခြားအ Forex ပွဲစားများမတူဘဲ, InstaForex အာရှနှင့်ဥရောပစျေးကွက်နှင့်အတူ resonate ကြောင်းထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုများ (24 / 7) သည်။
သငျသညျရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်အတူပြဿနာများရှိပါကသင်သည်သင်၏ပြဿနာကိုချက်ချင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်ဟုအာမခံနိုင်ပါသည်။ အများစုကပွဲစားများတနင်္ဂနွေနှင့်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များအပေါ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်ကြပါဘူး။ သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးဖို့သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ချက်တင်သို့မဟုတ်ဖုန်းမှတဆင့်သူတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ။
ဖုန်းနံပါတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှချောမွေ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစေရန်တိကျသောဌာနများထံအပ်နှံကြသည်။ Plus အား, သူတို့ကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဖောက်သည်ဖြည့်တင်းဖို့ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကိုဆက်ကပ်။ သင်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မီ, သင်သည်သင်၏ပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါတယ်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်, သင် ForexCopy စနစ်, Affiliate အစီအစဉ်ကုန်သွယ်အသုံးအနှုန်းများ, ကုန်သွယ်ဆာဗာများ, အကောင့်စိစစ်အတည်ပြု, သိုက် / ထုတ်ယူ, နှင့်အထွေထွေမေးခွန်းများကိုနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာရှာဖွေရေးခလုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ စားသုံးသူတောင်းဆိုချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးပုဒ်မများ၏စာရင်းမှန်မှန် updated ဖြစ်ပါတယ်။
မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကသင်၏ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံ, သင်အားဖြင့်ကျင်းပသည့်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်နိုင်ပါတယ် InstaForex။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုသက်သေပြမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးသောနှင့်စစ်မှန်သောဆုချီးမြှင့်ကြသည်။ အပြင် $ 500,000 ထက်ပို၏နှစ်ပတ်လည်ဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်ကနေကုန်သည်များကအသစ်စက်စက် devices များ, ပရီမီယံကားတစ်စီးသို့မဟုတ်မမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ပွဲစားအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံဒီလောက်စွန့်ခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်လွှအကောင့်ပေါ်တွင်ကုန်သွယ်ပြိုင်ပွဲကုန်သည်များသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုထက်မြက်ပြီးအမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ဤအပြိုင်ပွဲရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်လကြာကျင်းပကြသည်သောကြောင့်, သင်အမြဲအများဆုံးသင်သည်ကိုက်ညီတရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ, သင်ပြီးစီးခဲ့ပြိုင်ပွဲနှင့်တက်ကြွသောသူတို့ကိုထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနှင့်မှတ်ပုံတင်ပါဝင်သူများ၏စာရင်းကတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိပြိုင်ပွဲတစ် Lamborghini က Huracan ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆောင်များကထောက်ပံ့ပေးအခွင့်အလမ်းများ၏အသုံးချနေအသုံးပြုပုံသင်သည်သင်၏အိပ်မက်အီတလီကားကိုအနိုင်ရခြင်းဖြင့်စစ်မှန်သောလာစေနိုင်သည်။
InstaForex ငွေကြေးအားလုံး, အနာဂတ်, အစက်အပြောက်တူရိယာ, ညွှန်းကိန်း, CFDs, ရွှေ, ငွေ, Bitcoin နှင့်အခြားတူရိယာအပါအဝင် 300 ကုန်သွယ်တူရိယာထက်ပိုပေးထားပါတယ်။ 1 1 မှ: 1 သင်အသုံးပြုမဟာဗျူဟာပေါ် မူတည်. သြဇာ, သငျသညျ 1000 ကနေသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးကိုသြဇာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
သင်ပိုမိုရှေးရိုးစွဲနေတဲ့အခါမှာ, သင်ကအလယ်အလတ်သြဇာအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ သြဇာရွေးချယ်ရာတွင်နှငျ့သငျကောင်းသောပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်။ အဆိုပါအကောင့်ကိုလည်း hedging နှင့် scalping ခွင့်ပြုပါ။ သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းအချဉ်ကြည့်ဖို့, သင်သည်ဤကုန်သွယ်ယန္တရား၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အဆိုပါလဲလှယ်အခမဲ့ feature ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးအနေအထားကုန်သည်နေလျှင်သင်နေ့ချင်းညချင်းကိုကိုင်ထားအားလုံးရာထူးများအတွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့အတိုးမှအခမဲ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအခမဲ့လဲလှယ်အကောင့်ဖလှယ်ချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်စနစ်များကိုအသုံးပြုချင်သူကိုကုန်သည်များအဘို့အဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အဆိုပါလဲလှယ်-အခမဲ့ option ကို enable လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောကုန်သွယ်အခြေအနေများအတူတူပင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါပွဲစား cryptocurrencies ကုန်သွယ်မှုဆန်းသစ် tools တွေပေးပြီး Up-to-date ဖြစ်အောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်ဟာ Cryptocurrency ကမ္ဘာ၏အဓိကဖြစ်ရပ်များထံအပ်နှံနေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။
တိုင်းသိုက်အဘို့, client များတစ်လျောက်ပတ်အံ့အားသင့်ရရှိကြသည်။ အဆိုပါဆုကြေးငွေသင်တစ်ဦးရဲ့ margin ခေါ်ဆိုခရတဲ့မပါဘဲပိုကြီးတဲ့တွေအများကြီးအရွယ်အစားကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။
တိုင်းကုန်သည်ရန်ပုံငွေများဆုံးရှုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲပွဲစားတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုသည်။ သူတို့ရဲ့အစုစုအတွက်ထက်ပိုမို7သန်း clients များနှင့်အတူ, သငျသညျစိတျခပြါရနိုင် InstaForex သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကူညီပေးပါမည်။
InstaForex သိုက်နှင့်ထုတ်ယူများအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများပေးသည်။ အဆိုပါပွဲစားမသက်ဆိုင်သင်တို့အဘို့ go နည်းလမ်းသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေ၏လုံခြုံရေးအာမခံပါသည်။
InstaForex န်ဆောင်မှုများ၏အမြင့်ဆုံးတန်းနှင့်အတူ clients များပေးပါသည်။ ကုန်သည်ကြီးများတူရိယာတစ်ခုကျယ်ပြန့်, အမိန့်, အကြီးအပိုဆုကြေးငွေ, ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာများနှင့်ပွိုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏အစာရှောင်ခြင်းကွပ်မျက်ရယူနိုငျပါသညျ။
သူတို့ရဲ့အကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များနှင့်ကိုက်ညီအဖြစ်ဒါကသွားလာရင်းမှ Forex ပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။
Tags: instaforex နှင့်အတူဝင်ငွေကိုဘယ်လို, instaforex အကောင့်အတည်ပြုရန်ဖို့ဘယ်လို, instaforex, ဒွိ option ကို instaforex, instaforex သရုပ်ပြ server ကို, instaforex သိုက်, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို instaforex, instaforex ရဲ့ login, mt4 instaforex, instaforex ပြန်လည်သုံးသပ်, instaforex ရုပ်သိမ်းပေးရန်, instaforex ဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်, instaforex ဘာလဲ, instaforex အတွက်သြဇာကားအဘယ်သို့
Sanuk - ဇွန်လ 28, 2019 @ 06: 18
Instaforex အဆိုပါ Metatrader4နှင့်5ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သူတို့ဘေးဖယ်နေသည်အခြားရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာဖို့သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်သည့် platform ကိုရှေးခယျြနိုငျသောကွောငျ့ဤသည်အေးမြသည်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြောင့်ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအကြံပေးအသုံးပြုခြင်း၏လွယ်ကူခြင်းများအတွက်ဆက်ပြောသည် features နဲ့အဓိကအားဖို့ MT5 ပလက်ဖောင်းကိုသုံးပါ။ ဒီပွဲစားမှာကြှနျတေျာ့တစျခုလုံးကိုကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုတစ်လျှောက်လုံးငါပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲချောမွေ့စွာနှင့်မျှမ bug တွေနှင့်အတူပြေး။ ထိုကဲ့သို့သော webinars အဖြစ်၎င်းတို့၏အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းအားလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးကုန်သည်များမှကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်ကြသည်။
Instaforex အဆိုပါ Metatrader4နှင့်5ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သူတို့ဘေးဖယ်နေသည်အခြားရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာဖို့သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်သည့် platform ကိုရှေးခယျြနိုငျသောကွောငျ့ဤသည်အေးမြသည်။ ငါကိုယျတိုငျ MT ကိုသုံးပါ
အမျိုးအစား: Forex ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Created: အောက်တိုဘာလ 14, 2018